Khasaaraha ka dhashay Qarixii Wadajir oo sii kordhaya+Sawiro – Hornafrik Media Network
Khasaaraha ka dhashay Qarixii Wadajir oo sii kordhaya+Sawiro
By HornAfrik	 Last updated Jun 20, 2017
In ku dhaw 20 ruux ayaa ku geeriyootay qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay gudaha xarunta degmada Wadajir, iyadoo gebi dhaan dhismaha xarunta degmada ay burburtay.
Qaraxa oo ahaa mid aad u xooggan ayaa loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo ahaa nooca ay Soomaalida u taqaano Hoomey, kaasoo ka mid ahaa gawaarida caanaha keenta.
Wararka qaar ayaa sheegaya in gaariga is qarxiyay ay u suura gashay inuu gudaha u galo xarunta degmada, maadaama inta badan gaadiidka caanaha iyo khudaarta keena lagu canshuuro gudaha xarunta degmada, waxaa la sheegayaa inuu ahaa gaari laga yaqaanay xarunta degmada.
Goob joogayaal ayaa sheegaya in qaraxa uu saameeyay dhismayaal ka ag dhow xarunta degmada oo ku basbeelay Qaraxaasi. Waxaana Qaraxan laga dareemay Magaaladda oo dhan.
Maydad fara badan ayaa lagu arkayay Xarunta Degmadda. Waxaana jira Dad wali la la yahay oo ay suuragal tahay inay ku hoos jiraan Burburka Dhismayaasha. iyadoona wali Maydad hor leh laga soo saarayo Dhismaha xarunta oo gebi ahaanba bur burtay.
Guddoomiyaha degmada Wadajir iyo qaar ka mid ah Ilaaladiisa ayaa ku dhaawacmay qaraxa, sidoo kale waxaa jira dad kale oo iyana waxyeelo ka soo gaartay oo ka mid ahaa dadkii ka shaqeynayay xarunta degmada.
Xarunta degmada Wadajir ayaa ku dhow suuqa weyn ee degmada, oo ka mid ah suuqyada ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho.
Ciidamada ammaanka ayaa goobta xiray, waxaana socotay daad-gureynta dadkii ku dhaawacmay qaraxa.
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyada qaraxa ismiidaaminta ee ka dhacay xarunta degmada Wadajir.
Waa qaraxii u horeeyay ee noociisa ee lagu weeraro mid ka mid ah xarumaha degmooyinka Gobolka Banaadir oo aan horay looga baran in la bartilmaameedsado.
Xog:-Maxaad ka ogtahay Qaabkii uu u dhacay Qarixii Wadajir,? Bartilmaameedkuse ma Xarunta Degmadda ayuu ahaa